Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Khamriga & Ruuxa » Khamrigu Talyaanigu Wax Cusub Ma Jiro: Canab Waa Dhalan
kariska • dhaqanka • Italy War Deg Deg Ah • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Khamriga & Ruuxa
15 min akhris
Fanaanka: Miki De Goodaboom
Talyaanigu waa dalka kaliya ee aduunka oo dhan leh viticulture dhammaan gobolladiisa, laga soo bilaabo xeebta qoyan ee badda ilaa cagta buuraha Apennine, Alps Talyaani ah iyo Dolomites. Canabku waxay ka koraan loolka 36 darajo ee jasiiradda ugu koonfureed ee Pantelleria ilaa 47 darajo ee dooxada Alpine ee Valtelina.
Waxay ku koraan aagagga pedoclimatic oo aad u kala duwan (microclimate ku dhex jira ciidda kaas oo isku dara saamaynta isku dhafan ee heerkulka, biyaha ku jira iyo hawada).
Ku dhawaad ​​28 boqolkiiba noocyada canabka ee adduunka waxay u dhasheen Talyaaniga.
In ka badan 85 boqolkiiba oogada dhulka ee Italy ayaa u heellan viticulture oo leh noocyo dheer oo la aasaasay (inkasta oo aysan jirin noocyo badan).
Ma jiri lahaa khamri Talyaani la'aanteed?
Waxaa xiiso leh in la ogaado in marka la eego siyaasadda firfircoon ee dalka (ilaa qeybtii labaad ee qarnigii 19-aad), iyo muhiimadda suuqyada maxalliga ah (iyo dabayaaqadii 1970-meeyadii), in kala duwanaanshaha xaaladaha sii kordhaya ay keentay in Talyaanigu ilaaliyo Dhaxal aad u qani ah oo noocyo canab ah oo jira tan iyo bilowgii wakhtiga.
Khamrigu waa kala duwan yahay oo isku dhafan
Sangiovese, oo ah canabka guduudan ee talyaaniga ee ugu ballaaran qaranka, ayaa si dhib yar u daboolaya 12 boqolkiiba aagga geedka canabka ah ee qaranka, halka dhiggiisa canabka cad, Trebbiano Toscano, uu yahay wax ka yar 7 boqolkiiba, taasoo ka dhigaysa khamriga Talyaaniga sii kordhaya ee si cajiib ah u kala duwan. Ampelologist Anna Schneider ayaa ku qiyaasay in ay jiraan qiyaastii 2000 oo nooc oo canab ah oo la beeray gudaha Talyaaniga (ilaa 2006). Khubarada kale waxay soo jeedinayaan in ku dhawaad ​​1000 ka mid ah noocyada canabka talyaaniga ee la beeray lagu aqoonsaday hidde ahaan halka 600 loo isticmaalo in lagu sameeyo khamri tirooyin ganacsi oo muhiim ah.
Diiwaangelinta Qaranka ee Noocyada Canabka
Haddii noocyada canabka ah aan lagu qorin Diiwaanka Qaranka, wax dhir ah oo noocyada kala duwan ah looma diyaarin karo faafinta xarumaha xanaanada ganacsiga. Hadda waxaa jira 461 nooc oo canab ah oo rasmi ah, laakiin shakhsiyaadka gaarka ah iyo hay'adaha ayaa ka shaqeynaya inay ku daraan kuwa kale. Labaatanka canab ee ugu sarreeya Talyaaniga, 16 waa waddan iyo afar caalami ah (Merlot, Chardonnay, Pinot Grigio iyo Cabernet Sauvignon) iyadoo Merlot iyo Chardonnay ay ku jiraan tobanka sare.
Noocyada Canabka: Waxa loo qaybiyaa saddex qaybood
Dhalad (ama asal)
Caalami (ama ajnabi)
Canabka waxaa loo tixgaliyaa inay yihiin hooyo haddii ay "ku dhasheen" meel gaar ah oo ay si gaar ah ula xiriireen goobtaas. Waxaa suurtogal ah in qaar badan oo loo yaqaan "canab Talyaani ah" ay dhab ahaantii asal ahaan ka soo jeedaan Giriigga ama Bariga Dhexe, oo laga keeno soo noqoshada legionnaires Roomaanka, badeecooyinka badda ee Finishiyaanka iyo gumaystayaashii Giriigga. Ian D'Agata ayaa go'aamiyay in, "Si adag u hadlo, maaha dhammaan Canabka Talyaaniga Sidaa darteed runtii waa wadani iyo maxalli ahaan waxay noqon kartaa erey ka fiican oo lagu qeexo noocyada asalka ah ee asalkoodu aanu ahayn Talyaani si aan shaki lahayn…”
Canabka dhaladka ah (sida Cabernet Sauvignon iyo Chardonnay) ma aha kuwa adag oo si fudud ayay u saameeyaan:
Hababka khamri-samaynta qadiimiga ah (sida, in la guro dhammaan canabka isku mar, iyada oo aan loo eegin qaan-gaarnimada ugu fiican)
Maqnaanshaha nadaafadda maqaasiinka (wax ku biirinta kharribka khamriga)
Koritaanka aan joogtada ahayn ee canabka
Natiijada (xaaladaha qaarkood):
Dhadhanka khamriga asalka ah ee Talyaanigu wuu ka duwan yahay khamriga hadda jira
Canabku waxay soo saaraan rucubyo xoqan oo u oggolaanaya wax soo saarka mugga yar
Shakhsiyaadka noocyada qaarkood ah ayaa gebi ahaanba oksaydhaysan oo aan lahayn aashito soo bandhigaysa caajis, khamri fidsan
Canabku waxay ku bislaadaan waqtiyo kala duwan iyagoo leh miraha cagaaran ee aan bislaan ee ku xiga kuwa si buuxda u bislaaday. Miraha aan bislaan waa laga saari karaa; si kastaba ha ahaatee, waa hawl kharash badan oo waqti badan qaadata oo lagu sameeyo gacanta ama mashiinka kala-soocidda indhaha oo aad qaali u ah. Haddii kala-soocidda aan la samaynin khamriga ka dhashay waxay u badan tahay inuu yeesho caraf iyo dhadhamin cagaar cagaaran.
Farsamooyinka khamriga ee casriga ah waxay khatar ku noqon karaan canabka waddaniga ah ee Talyaaniga iyo doorka khamiirka waa la dhayalsan karaa. Noocyada khamiirka ee kala duwan ee loo isticmaalo halsano khamriga waxay u horseedi karaan natiijooyin kala duwan oo enological xitaa marka noocyada canabka ah ee isku midka ah, oo ku koray carrada isku midka ah, ayaa la isticmaalaa.
Noocyada Canabka Dhaladka ah (La xushay)
1. Aglianico del Taburno DOCG (La Fortezza Soc. Agr. Srl). Waxaa la asaasay sidii DOC sanadkii 1986; noqoshada DOCG sanadka 2011. U dhashay Campania, Basilicata (gobolada konfureed) canabku wuxuu soo saaraa casaan iyo ubaxyo buuxa. Oo ay la socdaan Sangiovese iyo Nebbiolo, Aglianico waa mid ka mid ah saddexda nooc ee Talyaani. Inta badan khamriga noocaan ah waxaa loo yaqaan 'Barolo of the South' sababtoo ah awoodda uu u leeyahay inuu soo saaro khamri aad loo sifeeyay, oo adag. Khamriga laga soo saaro Aglianico waa garnet qoto dheer oo isha ah oo leh shukulaatada iyo udgoonka tubta waxayna u egtahay in ay si buuxda u buuxsameen harag adag, aysidh sare iyo karti gabow wanaagsan. Marka uu da'da yahay, midhuhu wuxuu noqdaa mid aad u muuqda oo tannins ah oo dheellitiran.
2. La Fortezza. 100 boqolkiiba Aglianico del Taburno DOCG. Ruby casaan isha, sanku wuxuu helaa udgoonka berry madow duurjoogta ah. Waxay ku jilicsan tahay dhadhanka oo leh qoraallo wacan oo macaan cherry madow. Canabka waxaa gacanta lagu soo goostaa dhammaadka Oktoobar waxayna ku qaataan 8 bilood birta, 10 bilood oo dheeraad ah oo barmiil ah. Khamrigani wuxuu u baahan yahay in si fiican loo jeexjeexo ka hor kabashada. Ku diyaari baasto, hilib (gaar ahaan dubay, maraqa iyo suugada) iyo/ama farmaajo gaboobay.
3. Lambrusco Modena DOC (Cantina Ventiventi Societa Agricola Il Borghetto). Canabka waa in lagu beeraa gobolka Modena oo ay ku jiraan noocyada soo socda (85-100 boqolkiiba): Grasparossa Lambrusco, Lambrusco Salami, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Oliva Lambrusco (la isticmaalo kaligiis ama la oggol yahay). ku darida Ancellotta midabka) canabka, Malbo Gentile iyo/ama canabka Fontana (ilaa 15 boqolkiiba). Canabku waxa ay soo saaraan khamri cas oo dhalaalaysa oo leh midab rubi ah, udgoon jilicsan iyo macaan oo ku yaal calaacalaha oo lagu xoojiyay qoraallada ubaxa.
Cimiladu waa diirimaad leh xagaa kulul iyo jiilaal qabow. Ciidda ku taal bannaanka Emilia Romagna waxa ay qani ku tahay cusbada macdanta, beerihii canabka ahaa ee ku yaalla buurta waxa u badan dhoobo leh dhagax-cammuud ah, kuwaas oo soo saara khamri fudud oo lagu raaxaysto inta ay yaryar yihiin.
Khamrigu waxay ku kobcin karaan dhalada oo inta badan waxay khamiiraan iyadoo la isticmaalayo habab dhaqameed. Cadaadisku kama badnaan karo 80 litir oo waxyar ka sarreeya Champagne. Halsano waxay ku dhacdaa heerkul aad u hooseeya (23-25 ​​digrii) si loo ilaaliyo udgoonka miraha cusub oo laga soo saaro tiro yar oo tannins ah.
• Cantina Ventiventi Rose Lambrusco Di Modenado. 100 boqolkiiba canabka Sorbara.
Qoyska Razzaboni ayaa beertan canabka ah ku leh degmada Modenese ee Medolla. Beerta canabka ah waxay isticmaashaa Metodo Classico, abuurista khamriyo cusub oo gaar ah. Organic shahaadeysan ee 2019, goosashada makaanikada waxaa loo qorsheeyay saacadaha ugu qabow maalinta. Canabka ayaa markaa la qaboojiyaa oo la riixaa. Halsano waxaa lagu qabtaa heerkul la kantaroolo oo ah birta aan fiicnayn iyo sifaynta qabowga daba dheeraatay ee birta ah. Ku darida qasabka iyo halsano labaad ee dhalada waxaa lagu sameeyaa heerkul la kantaroolo.
Midab casaan ah oo jilicsan oo isha ah, oo leh miro guduudan oo abaal marinaya sanka. Jilicsan oo macaan leh oo dhadhanka leh oo dheellitiran macdanta. Daciifsanaanta iyo qulqulka joogtada ahi waxa ay kordhisaa cusaybka. Ku darso cuntooyinka badda.
4. Trebbiano d'Abruzzo DOC (oo la mid ah Faransiiska Ugni Blanc)
Abruzzo waa gobol khamri ah oo ku yaal bartamaha bari ee Talyaaniga oo ku taal xeebta Badda Adriatic. Marka loo eego sharciyada DOC ee rasmiga ah, khamriga Trebbiano d'Abruzzo waa in laga sameeyaa ugu yaraan 85 - 100 boqolkiiba Trebbiano Toscano ama Trebbiano Abruzzese ama isku darka labada kooxood.
Canabka Trebbiano d'Abruzzo waxaa la diiwaangeliyay 1856-kii Raffaele Sersante oo xusay caannimada iyo baahsanaanta noocyada canabka ee beero canabka ah. Waa canab cad oo wax-soo-saar sare leh oo ka soo jeeda Koonfurta-Bari Mediterranean-ka. Waxay si fiican u koraan carrada argillo-calcareous. Hadda beeritaanka ayaa ka badan kala badh khamriga cad ee dalka.
Khamrigu waa midab dahabi ah, caadi ahaan qalalan iyo miro-horumar leh oo leh bouquet jilicsan oo midho huruud ah, tufaax, liin iyo ubaxyo cad oo sanka ah. Dhanku wuxuu helaa asiidh dheeli tiran, dhiirigelin leh, daahsoon, plums huruud ah oo qurxoon. Soosaarayaasha qaarkood waxay isticmaalaan halsano foosto iyo/ama korriinka foosto si ay ugu daraan kakanaanta, qoto dheer iyo jirka. Waa DOC kaliya ee Abruzzo ku takhasusay khamriga cad. Cab yar iyo qabow. Ku dar baastada cuntada badda, risotto, maraq khudradeed, foorno lagu dubay ama kalluun la dubay.
• Azienda Vinicola Talmonti. 100 boqolkiiba Trebbiano
Waxaa bilaabay qoyska Di Tonno ee Abruzzi beerta canabka ah ee 32 hektar ah waxay ka kooban tahay dhoobo dhagax nuurad ah, carro calcareous ah oo habaysan oo miiray, 300 mitir ka sarreysa heerka badda. Xulasho taxaddar leh oo canab ah ayaa la sameeyaa horraanta Sebtembar. Cawska canabka ah waa la soo saaraa oo ay raacdaa maraq gaaban oo qabow oo canab ah oo la jajabiyey ee birta aan fiicnayn oo ay ku xigto cadaadis jilicsan iyo jarista qasabka ah. Khamiirka khamriga leh ee khamiirka la doortay wuxuu socdaa 10 maalmood; dhalada waxay dhacdaa dhawr bilood ka dib goosashada.
Midab caws ah oo cirro leh oo leh midabyo cagaaran oo khafiif ah ayaa isha ka farxiya, isagoo soo bandhigaya bouquet qani ah oo ay xoojiyeen udgoonka ubaxa ee violet-ka oo leh tufaax, cherry iyo miro guduud sanka. Waqti yar ayaa lagu qaataa foostada waxay soo saartaa khamri leh tannins kuwaas oo cufan laakiin aan fiicneyn oo kama dambaysta ah waa qallafsanaan, nadiif ah oo cusub. Ku adeega sida aperitif iyo/ama digaag, cunto badeed, hilib doofaar ama ham.
Aglianico waa canab madow oo laga beero gobollada koonfureed ee Talyaaniga (Basilicata iyo Campania). Waxaa loo malaynayaa inay ka timid Giriiga oo ay ku beeran yihiin Phocians oo ka yimid geed canab ah oo awoowayaal aan la aqoonsan; si kastaba ha ahaatee, falanqaynta DNA-da casriga ah ma taageerto aragtidan maadaama ay muujinayso xidhiidh yar oo la leh noocyada kale ee canabka Giriigga. Kala duwanaanshiyaha ayaa markii ugu horreysay u muuqday daabacaadda sida jamac dhedig Aglianiche (1520). Oenologist Denis Duboudieu ayaa go'aamiyay in "Aglianico ay u badan tahay inuu yahay canabka leh taariikhda macaamiisha ugu dheer." Waxa loo isticmaali jiray samaynta khamriga Falemiya wakhtiyadii Roomaanka, khamrigii ugu caansanaa ee laga soo saari jiray Rooma hore oo uu u tixgeliyey Pliny the Elder.
Agianico waa khamri cas oo leh qaab dhismeed, aysidh firfircoon iyo karti da'. Udgoonka ubaxa, iyo marmarka qaarkood tannins aan la dafiri karin ayaa soo gala iyagoo isku dayaya inay ku raaxaystaan ​​macdanta macaan. Waa wax badan oo kala duwan, iyo khamriga laga soo bilaabo noocyadan kala duwan ayaa si fiican loogu raaxaysan karaa da'da yar iyo da'da. Inta badan marka la barbardhigo Nebbiolo, canabka weyn ee Barolo iyo Barbaresco. Waxay ku xidhan tahay gobolka Campania ee koonfurta talyaaniga laga bilaabo badda Tyrrhenian oo ay ku jiraan Naples, Pompeii, Xeebta Amalfi, Salerno iyo Paestrum. Waxay ku koraan Basilicata.
(La Guardiense – Sannio 2014). 100 boqolkiiba Aglianico
Ishu waxay ku faraxsan tahay midab guduudan oo qoto dheer iyo madow halka sankuna uu ogaanayo cherry-ku qaso vanilj (laga bilaabo foosto), oo lagu daray qoraallo basbaas ah. Dhadhanka waxaa lagu maaweeliyaa tannins oo abuura khibrad dhadhan jilicsan oo jilicsan.
Canabka waxaa la goostay qeybtii labaad ee Oktoobar. Maceration on maqaarka muddo 18 maalmood ah iyada oo in yar oo maalin walba bamgareynaya, 20 boqolkiiba dhiig baxay. Apres-ski qumman; ku dar baastada/ maraqa hilibka, maraq khudradeed, dhexda doofaarka, duban bara, iyo hilib la daweeyay.
6. Sfozato (ku qasbida canabka) DOCG
Sfozato waxay soo saartaa khamri cas oo xoog badan oo ku salaysan noocyada canabka Nebbiolo ee Valtellina, oo ah degmo ku taal gobolka Lombardy ee waqooyiga Talyaaniga. Waxay ku gaadhaa heerar alkohol ah oo sarreeya iyo feejignaan weyn marka ay qalajiso canabka (passito). Canabka ugu fiican ayaa la doortaa, mid kasta oo ka mid ah berry qudhuntay ama dhaawacantay waa in meesha laga saaraa maadaama habka qalajinta uu xoogga saarayo cilladaha.
Qaybaha oo dhan ayaa la dulsaaraa sariiraha cawska ee qolalka hawo fiican leh halkaasoo ay ku sii jiraan 3-4 bilood, iyadoo berry kasta uu luminayo ku dhawaad ​​boqolkiiba 40 miisaankiisa badiba uumiga biyaha kaas oo xooga saaraya sonkorta dabiiciga ah ee canabka. Casiirku waxa uu isu rogaa sharoobo macaan, Sforzato-gii caadiga ahaa waxa uu soo saaraa khamri jidhkiisu dhan yahay, qamriga ku badan yahay, dhadhankiisuna qani ku yahay oo keenaya udgoon adag oo xawaash macaan ah (ie, licorice, toon iyo qorfe), plomme la dubay, maraqa iyo sabiib iyo sidoo kale tilmaamo daamur iyo ubax.
Beerta canabka ah waxaa la aasaasay 1986 by Alberto Marsetti wuxuuna aaminsan yahay in Nebbiolo uu leeyahay dhadhan qani ah oo leh xaaladaha cimilada saxda ah. Beerta canabka ah oo dhererkeedu dhan yahay 10 hektar waxa ay ku taallaa deegaanka Sondrio halkaas oo ay ciiddu tahay ciid bacaad ah taas oo ay sabab u tahay kala daadsanaanta dhagxaanta korka ka taagan.
Sfursat della Valtellina DOCG waa kan ugu da'da weyn khamriga Valtellina. Ortensio Lando (1540) ayaa soo xigtay iyo dukumentiyo kale oo ku saabsan Sforzato horaantii 1300. Khamriga waxaa loogu talagalay isticmaalka qoyska waxaana loo maamulay dawo soo celin ah oo loogu talagalay cudurrada. Maanta noocyada kala duwan waxaa loo yaqaanaa khamriga sharafta leh ee Valtellina. Da'da barriques, khamrigu wuxuu kobciyaa caraf udgoon oo morello-cherry ah oo khamri ah oo leh tannins jilicsan iyo acidity wanaagsan. Ku dheji shukulaato madow.
Mustaqbalka Canabka Dhaladka ah
Canabka naadirka ah waxaa loo yaqaan erayo badan oo ay ku jiraan madmadow, qarsoodi, yaab leh, wadani ah, iskiis ah ama la ilaaway. Celcelis ahaan isticmaalayaasha khamriga ayaa laga yaabaa inay la yaabaan sababta somms ama geeks khamrigu ay aad ugu faraxsan yihiin "helida" canab qadiimi ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado in qaadashada kabo khamri ah oo laga sameeyay canab dahsoon ay hubaal tahay "sare" sababtoo ah waxay siinaysaa farqi u dhexeeya iyo isbeddel dhadhanka khamriga cabba. Kala duwanaanshaha ayaa sii kordheysa baahida loo qabo adduunka khamriga iyo suurtagalnimada boqolaal (ama kumanaan) noocyo canab ah maaha oo kaliya muhiim u ah howlgalka, ilaalinta kala duwanaanta adduunka dhirta, laakiin sidoo kale waxay bixisaa khadka difaaca ee wejiga kuleylka caalamiga ah.
Gobollada khamriga ee Yurub oo dhan waxay bilaabeen xanaano si loo ilaaliyo noocyo asal ah oo asal ah. Koonfurta Faransiiska, Domaine de Vassal, oo ah xanaano dawladdu leedahay (1878) waxay haysaa qiyaastii 7800 nooc, ururinta ugu weyn adduunka. Savoie, France, Xarunta Ampelography ee Alpine waxay raadisaa noocyo naadir ah. Waxay leedahay xannaano u gaar ah, waxay qabataa micro-vinification's waxayna qabataa shir sannadle ah. Wine Mosaic, oo ay bilaabeen Lean-Luc Etievent iyo Arnaud Daphy, waxay dhiirigeliyaan ilaalinta noocyada canabka asalka ah ee Mediterranean.
Qaar badan oo "xoogayaasha geedaha canabka ah" waxay aaminsan yihiin in isbeddelka cimiladu u baahan doono canab kala duwan si ay u koraan mustaqbalka, kuwa si degdeg ah u bislaaday, si fudud u gubi qorraxdu ama waxay siinayaan asiidh ama qaab dhismeed ka wanaagsan noocyada caadiga ah. Noocyada qadiimka ah ayaa hoos loo dhigay natiijada wax soo saarka oo liita awgeed iyo noocyada caadiga ah waxay halis ugu jiraan isbeddelka cimilada. Dunida khamriga waxay isku dayeysaa in ay u diyaargarowdo isbeddelka iyo soo noolaynta noocyo hore oo xalal cusub ah.